လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: Samsung ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာ တရားဝင် ရပြီဟုဆို
Samsung ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာ တရားဝင် ရပြီဟုဆို
Wednesday, July 03, 2013 iOS Devices ဆိုင်ရာ | နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
၂၀၁၃ ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ Samsung Galaxy Grand (GT 9082) ဖုန်းနှင့် အခြား Android 4.1 နှင့်အထက် Official Update ပေးသည့် Samsung ဖုန်းများကိုလည်း Samsung မှ မြန်မာစာ တရားဝင် ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း www.myanmarmobileapp.com မှ ဆိုသည်။
Root မလုပ်ထားသော Samsung ဖုန်းပိုင်ရှင်များသည် တရားဝင် Samsung ၀က်ဆိုဒ်မှ versionကို upgrade လုပ်လိုက်သည်နှင့် မြန်မာစာ တပါတည်းပါလာသော versionကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဟုလည်း ဆိုထားသည်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက http://www.myanmarmobileapp.com/2013/07/02/မြန်မာနိုင်ငံမှ-samsung-galaxy-grand-နှင်/ တွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
iOS Devices ဆိုင်ရာ, နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ,
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုသင့်သော အကြောင်းအရာများ: iOS Devices ဆိုင်ရာ, နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သေနတ်ပစ်သမား အဖ...
SAMSUNG GALAXY PHONE/TABLET တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ RO...
အင်တာနက်လိုင်း မကောင်းလည်း Facebook မြန်မြန်သုံးမယ...
Virus တော်တော်များများကို သတ်နည်းအကြောင်း
Uterine Fibroid (1) သားအိမ်အလုံး (၁) (18+)
အစားအစာတွေကို အနုကြည့်မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်မယ်....
မလေးရှားပန်းချီကျော် Vince Low ရဲ့ လက်ရာဆန်း....
Ashampoo Movie Studio 1.0.1.15 With Serial Key Fre...
Hepatitis B Immune Globulin အသဲရောင်-ဘီ (ဂလိုဗျူလင...
လူသားတွေရဲ့ ကျင်ငယ်ရည်နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို အား...
ဆေးရောင်စုံအရည်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာ.....
ကျောက်ကမ်းပါးစွန်းမှာ တွဲလောင်းဆွဲ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ...
စိတ်ဝင်စားစရာ စက်မှုကမ္ဘာ - ၃
Menstruation (1) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၁)...
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၉)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ (၆၆...
Menstruation (3) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၃)...
Huawei Official Firmwares Collection (Mediafire Li...
Kaspersky Key Files (15 July 2013)...
Android Games ကြိုက်သူများအတွက် 53 Top Paid Androi...
Android ဖုန်းတွေအတွက် Top Paid Application and The...
သတိထားရမဲ့ Samsung Galaxy S3 Smartphone ရဲ့ ဘက်ထရီ...
အံ့ဖွယ် 3D အနုပညာ....
အံ့ဖွယ်မိတ်ကပ်ပညာ - Before and After....
Unlock Root Pro v4.10 full with Serial (No fake, R...
တက်တူးချစ်သူများ - ၃
တက်တူးချစ်သူများ - ၄
Menstruation (2) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၂)...
အင်တာနက်လုံခြုံရေးအတွက် မဟာတံတိုင်းကြီး FortKnox P...
နိုင်ငံခြားသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု FEC ငွေဖြည့်ကတ် မလို...
Android OS တွေကို Root နိုင်တဲ့ Baiduakey Root T...